Misfit wuxuu soo bandhigayaa Shine 2, jijin isboorti oo aad u wanaagsan | Wararka IPhone
Misfit wuxuu soo bandhigayaa Shine 2, jijin isboorti oo aad u fiican
Waa la ogyahay in Apple Watch uu yahay aaladda ugu guulaha badan ee suuqa lagu gashado, si aad u badan oo ay tahay dhibaato ku dhacdo ilaa saacadaha caanka ah ee Switzerland, laakiin taasi micnaheedu maaha inaysan jirin isticmaaleyaal wax raadinaya ka fudud. Isticmaalayaashan, mid ka mid ah shirkadaha ugu xiisaha badan jijimooyinka isboortiga, Misfit ayaa sii deysay Shine 2.
Shine 2 wuxuu baran doonaa qof kasta oo yaqaan nooca asalka ah. Waxaa lagu sameeyaa isla naqshad wareegsan, laakiin a jir khafiif ah (8mm), oo wuxuu uga tagay 12ka nalalka ogeysiiska cad inuu soo bandhigo in kabadan 16 milyan oo midabyo ah, taasoo kuu ogolaaneysa inaad muuqato xitaa marka ay ku dhacdo qorraxda tooska ah.
Nalalka sidoo kale waxay muujinayaan horumarka maalinlaha ah ee howlaheena isboortiga, mana ahan sidaas cayaaraha, maadaama ay u adeegto ilaali hurdada. Sida Apple Watch, waxaan u qaabeyn karnaa Shine 2 si aan u gariirinno si aan ugu dhiirrigelino inaan sameyno waxqabadyo isboorti ah. Sida aad ku aragto fiidiyowgii hore, cabirkiisa yar wuxuu noo ogolaanayaa inaan xitaa cagaha saarno si aan u cabirno howlaheena baaskiil wadista, wax aanan xitaa ka fiirsan doonin ku sameynta Apple Watch. Waxaan sidoo kale u qaabeyn karnaa si aan u gariirno si aan u toosno.
Laakiin waxaan ku bilaabaynaa waxa runtii muhiim ah. Shine 2 kuma shaqeeyo baytariyada; Waxay la shaqaysaa baytariyada la tuuro. Waa run inay tahay kharash dheeri ah, laakiin uma baahnid inaan bedelno illaa 6 bilood kadib, taas oo macnaheedu yahay inaan bixin doonno qiyaastii € 4 sanadkii bateriga badhanka. Kumaa saxeexi doonin inuu spend 4 sanadkii ku qarash gareeyo Apple Watch inuu 6 bilood socdo ilaa ay baterigu ka dhammaadaan?
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah in Shine 2 isaguna u adeego hesho ogeysiisyo. Nalalka ayaa naga caawin doona inaan ogaano haddii aan helnay SMS ama wicitaan, in kastoo dhibaatada muuqata ee ah inaanan garaneynin cidda isku dayaysa inay nala soo xiriirto, waana wax, si daacadnimo ah, aanan garanayn inay fiicantahay iyo inay xun tahay. Tusaale ahaan, haddii aan orno oo aan helno ogeysiis, ma awoodi doonno inaan ogaanno haddii ay tahay wax muhiim ah ama wax aan uga tagi karno baarkinka illaa aan ka dhammeyno dhaqdhaqaaqa jirkeena.
Jijimadaha isboortiga waa inay noqdaan kuwo adkaysi leh oo Shite 2 waa biyo ma galeen 50m. Taas macnaheedu waa inaan ku dabbaalan karno, laakiin ma quusin karno. Waqtigan xaadirka ah wuxuu la mid yahay kan Apple Watch, in kasta oo Apple ay noo sheegayso in saacaddiisu ay tahay uun buuq adkaysi u leh. Sikastaba, gudaha boggooda Iyagu ma sheegaan nooca shahaadada IPxx ee ay haysato, wax aan ku aragno bogga Apple Watch (IPx7).
Jiilkan labaad ee Shine wuxuu la jaan qaadayaa codsiga Xiriirinta Misfit, codsi naga caawin doona inaan ku qabanno ficillo kala duwan iPhone-keena (ama Android) sida xakameynta muusikada ama qaadashada sawir-qaadashada, iyo sidoo kale xakameynta waxyaabaha qaarkood saacadda sida, si macquul ah, bilaabista ama joojinta howlahayaga isboorti.
Jijimadda Misfit Shine 2 ayaa hadda laga heli karaa dalal kooban, sida Mareykanka, Faransiiska ama Jarmalka, a qiimaha $ 99. Misfit wuxuu hubiyaa inuu gaari doono dukaamada kale mararka qaar november.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Misfit wuxuu soo bandhigayaa Shine 2, jijin isboorti oo aad u fiican
Waxaan siiyay saaxiibtey qosolka 1 dhowr bilood kahor runtuna waxay tahay inay aad u faraxsantahay. Waxaan arkaa furaha marka la barbar dhigo jijimooyin kale 2 shay.
1. In aad ka warbixiso horumarkaaga maalinlaha ah, taasi waa ta kugu dhiiri galinaysa inaad ka tagto gurigaaga si aad hadafka u gaarto. Haddii aad aragto horumarka ay ahayd inaad u waafajiso markasta, inta badan lama qaban lahayn.
2. In aysan ahayn in maalin walba dib loo soo celiyo. Waxaan arkay dad kale oo maalin walba ka qaada si ay habeenkii lacag uga qaadaan, maalintii ay iloobeenna inay dib u dhigaan, waxay ahayd toddobaad ama 2 joogsiga taariikhi ah.
Noocan labaad wuxuu umuuqdaa mid aad ufiican, aan aragno markuu kasoo baxayo Spain
Apple waxay daabacdaa toddobo ogeysiis cusub oo Apple Watch ah
"Raadi saaxiibo" hadda laga heli karo shabakadda iCloud.com